သင်သိသင့်သော အင်တာနက်မှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် - Zomi Computer and Internet Association
Home / Gmail / သင်သိသင့်သော အင်တာနက်မှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
သင်သိသင့်သော အင်တာနက်မှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
Taang Sianpu January 08, 2011 Gmail
ပထမဆုံး email အသုံးပြုသူများ အတွက် အကောင့်အား လုံခြုံမှု့ရှိစွာ အသုံးချနေဖို့ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ ။
အများဆုံ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Google ရဲ့ Gmail က မြန်မာတွေ လက်စွဲပါ ..
ကမ္ဘာသုံး email ပေါင်းများစွာရှိပါတယ် ထိုအထဲမှာ အများဆုံးထင်ရှားတာကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်
2010 ခုနှစ် November လအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Gmail အသုံးပြုသူ သန်းပေါင်း 176 သန်းကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်
၀န်ဆောင်မှု့ နဲ့ တွဲဘက် လုပ်ဆောင်ချက်များ ကောင်းမွန်းလာသောကြောင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ့လူသုံး အများဆုံး email တစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
Gmail ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့တွေထဲမှာ 2010 April လက (ကျွန်တော်ရေးတင်ခဲ့ပြီးသား)စတင်တဲ့ Verify with personal Data Action အားထည့်သွင်းခဲ့ပြီး Gmail သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ တော့ ကျွန်တော်တို့ အနှစ်သက်ဆုံး အချက်လို့ ပြောနိုင်ပါတဲ့ Recovery Option ကြောင့် လုံခြုံမှု့ ရှိလာတဲ့ ထိပ်တန်း email အမည်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ် ။
သိရှိပြီးသား သူများရှိသော်လည်း မသိရှိသေးသော သူများ အတွက်တော့ ဒီဘလော့က အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ် ။ အဆင့်ဆင့်ရှင်းလင်းအောင် ကြိုးစား ရေးသားပေးပါတယ် ။
မိမိ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ email အကောင့်အတွက် သူတစ်ပါး အလွဲသုံးစားယူသုံးမယ် ၊ Phasing နည်းပညာ (Hacking) အသုံးပြီး မိမိပိုင်အကောင့်အား ခိုးယူသုံးစွဲမယ်ဆိုပါက ပြန်လည်ရယူသော နည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ပြုလုပ်ပုံမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည် ။
မိမိ gmail ကို ဖွင့်ပါ ၊ Setting ကို ကလစ်ပါ ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် Setting စာမျက်နှာရှိ Account and Import နေရာကို ရှာကလစ်ပါ ပြီးက Google Account Setting ကို ကလစ်ရန်လိုပါတယ် အောက်ပါ ပုံကို ကြည့်ပါ ။
2. Google Account Setting အား ကလစ်ပီးပါက နောက်စာမျက်နှာတစ်ခု ပွင့်လာမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် Profile အား တွေ့ပါလိမ့်မည် ထို စာမျက်နှာတွင် Password Recovery Option အားကလစ်နိုင်ပါတယ် အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ
အထက်ပါနေရာ ကလစ်ပြီးပါက အောက်ပါ အဆင့်ကို လုပ်ပါ ။
3. ထိုနေရာကို ကလစ်ပြီးပါက ရောက်ရှိမည့် စာမျက်နှာတွင် Secondary Email လိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပတ်အား သေချာစွာ မှတ်သားပြီး ဖြည့်စွက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ထိုသို့ဖြည့်စွက်ထားရမည့် နေရာများကို အောက်ပါ ပုံအမှတ် ၃ အား ကြည့်၍ သေချာရန်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
ထို ပုံအရ Your Recovery Email Address နေရာမှာ သင်စိတ်ချ ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကောင့် 1 ခုအား ထပ်မံဖြည့်စွက်ရမည် ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖုန်းဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု့ပေးသော Recovery လုပ်ဆောင်ချက်မရှိသော်လည်း နိုင်ငံတစ်ကာရှိ Mobile Phone ရှိသောသူများအတွက်မူ ဖုန်းနံပတ်နေရာတွင် တိုင်းပြည်ကုတ်နှင့် မှန်အောင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါက အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထို အဆင့် များလုပ်ဆောင်ပြီးပါက Save လုပ်ရန်လိုပါတယ်
ပြီးပါက သင့် email အတွက် တစ်ယောက်ယောက် ခိုးယူသုံးစွဲခြင်း ၊ မသမာသောနည်းဖြင့် အကောင့်အား သုံးစွဲနေခြင်းရှိလာပါက
အချိန်မရွေး ပြန်လည်ရယူ နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်နေထိုင်သော နေရာဒေသ မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားနေရာတွင် အကောင့်အား
Password ပြောင်းလိုက်မည်ဆိုပါ က သင်အသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သင့်ထံ အသိပေး မည်ဖြစ်ပါတယ် ။
သင့် ဒုတိယ email နှင့် ဖုန်း SMS သို့ ထဲသို့ Verify Number များ ပို့သောအခါ သင်မှတ်သားထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
နမူနာ Verify နံပတ်များကို အောက်ပါ အတိုင်း သင့်ဒုတိယ ပေးထားသော email အကောင့်ထဲသို့Gmail Team လိပ်စာဖြင့်
စာ ရောက်လာပါလိမ့်မည် ။
Congratulations on creating your brand new Gmail address, XXXXXXXX@gmail.com.
Verification code: 883511fe-d9fcc90a-5322285bed
အထက်ပါ Verification Code နံပတ်မှာ သင် သေချာ မှတ်ထားရမည့် နံပတ်ဖြစ်ပြီး အကောင့်အား Verify လုပ်ရမည့်အချိန်တွင် သင်အသုံးပြုရမည့် နံပတ်ဖြစ်ကြောင်း ။